भलिबलको पदकमा विदेशी प्रशिक्षकको हुर्मत ! - Khelpati
भलिबलको पदकमा विदेशी प्रशिक्षकको हुर्मत !
शनिवार, श्रावण ३१, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । भलिबलको इतिहासमा नेपालको राष्ट्रिय महिला टिमले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा ऐतिहासिक रजत पदक जित्यो । महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा थिए, जगदिश भट्ट ।
सागको गौरवमय ईतिहासमा नेपाली प्रशिक्षकले प्राप्त गरेको सफलतालाई एक जना विदेशी प्रशिक्षकले हुर्मत लिने काम गरेका छन् । पुरुष टिम हेर्ने जिम्मेवारी सहित नेपाल आएका नेदरल्याण्डका प्रशिक्षक लिस्ले डी जोङले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको महिला टिमले सागमा रजत पदक जितेको दाबी सहित अन्तराष्ट्रिय फोरममा आफुलाई प्रस्तुत गरेको खुल्न आएको छ ।
भलिबलकै ईतिहासकै पहिलो पटक प्राप्त ऐतिहासिक रजत पदक आफुले जिताएको भन्दै झुटको खेती गरेर प्रशिक्षक लिस्लेले आफ्नो भलिबल फाउन्डेनलाई उकास्ने काम गरेको पाईएको छ ।
नेपाल भलिबल संघले गत मंसिरमा सम्पन्न १३ औं सागमा पुरुष टिम हेर्ने गरि अन्तिम समयमा लिस्लेलाई प्रशिक्षकको रुपमा नेपाल झिकाएको थियो । विदेशी प्रशिक्षकको रुपमा नेपाल आएका लिस्लेले पुरुष टिमलाई खासै गतिलो नतिजा दिन सकेनन् । पुरुष टिम समूह चरणबाटै बाहिरिन पुग्यो ।
पुरुष टिमबाट लज्जास्पद प्रर्दशन र नतिजा भोगेका लिस्ले महिला टिमका हरेक खेलमा कोर्ट वरपर देखिन थाले । फाईनल खेल नेपालको महिला टिमले भारतसंग गुमाउँदा उनी नेपाली टिमसंगै देखिन्थे । उनी महिला टिमको पदक समारोहमा समेत खेलाडीसंगै उभिए । रजत पदक भिरेर फोटो समेत खिचाए । सोही फोटोलाई दुरुपयोग गर्दै लिस्लेलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफुले नेपालको महिला टिमलाई रजत पदक जिताएको दाबी सहित प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
लिस्लेले महिला टिमको प्रशिक्षक आफु रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको महिला भलिबल टिमलाई रजत पदक जिताउन सफल भएको दाबी सहित एसियाली भलिबल महासंघ (एभीसी)मा लामो समाचार लेखाएका छन् ।
एभीसीको आधिकारिक वेव साईडबाट लिस्लेले सञ्चालन गरेको परियोजनाको समाचार आएसंगै उनको झुट समेत बाहिर आएको हो । उनले नेपालका मानिसमा रजत पदक जित्न विश्वास नगरेको अवस्थामा आफुहरुले टिमलाई एकीकृत गर्दै आत्मविश्वास दिलाएर नतिजा दिलाएको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भलिबल टिमका पूर्व कप्तान जयनारायण चौधरीले एक विदेशी प्रशिक्षकले ब्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठासंग आँच पुर्याउने काम गरेको बताउँछन् ।
‘गलत रुपमा फोटो खिचेर बाहिर भजाउन मिल्दैन । विदेशीको रुपमा उसले नेपाललाई सहयोग गरेको हुन सक्छ । तर उसले नेपाली प्रशिक्षकको ब्यक्तित्व र आर्दशमा धोका दिने काम गरेको छ ।’ उनले खेलापाटीसंग भने ।
‘सहयोग आउँछ भनेर सबै सहज रुपमा लिनु हुदैन । सहयोगको सिमा हुन्छ । त्यही भित्र रहेर सबैले गर्न पर्छ ।’ चौधरीले थपे ।
‘अन्तराष्ट्रिय जगतमा सिर्जना गर्न खोजिएको झुटको हामीले बिरोध गरेका छौ । एभीसीले केही सच्चाएको छ । तर प्रशिक्षक (लिस्ले) फटाहा काम गरेको देखिन्छ । उसले भलिबलसंग माफी मागेर गलत कुरा हटाउनुपर्ने हो । उसले नेपाली प्रशिक्षकको ब्यक्तित्व र गौरवमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।’ पूर्व कप्तान चौधरी थप्छन् ।
चौधरी सहित प्रशिक्षक कपिल किशोर श्रेष्ठले लिस्लेको गतिविधिबारे नेपाल भलिबल संघको ध्यानाकर्षण गरेपछि एभीसीले महिला भलिबल टिमको प्रशिक्षकको रुपमा लिस्लेको नाम हटाएको छ । तर रजत पदक जिताउन आफुले भूमिका खेलेको आशयका अभिब्यक्ती अझैपनि समाचार सामाग्रीमा यथावत छ ।
नेपाल भलिबल संघले बंगलादेशमा आयोजना भएको एभीसी सेन्टर जोनमा तत्कालिन सचिव समेत रहेका जगदिश भट्टलाई महिला टिमको जिम्बेवारी दिएको थियो । उनले तत्कालिन कप्तान विनिता बुढाथोकी, नेविका चौधरी, मञ्जु गुरुङ लगायत खेलाडीलाई बाहिर राख्दै टिम तयार पारेका थिए । भलिबलका अनुभवी अनुहारलाई बाहिर राख्ने भट्टको निर्णयको संघ भित्रका पदाधिकारी, खेलाडी र सञ्चारमाध्यमले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
सम्पूर्ण आलोचना आत्मसाथ गर्दै सागमा ऐतिहासिक रजत पदक जिताएका भट्टको सफलताको श्रेय डच प्रशिक्षक लिस्लेले लिएका छन् ।
‘यस बिषयको जानकारी हुने बित्तिकै लिस्लेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर उनले यस बिषयमा आफ्नो गल्ती भएको र माफी माग्दै सम्पादनको लागि एभिसीमा निवेदन दिएको बताएका छ ।’ भट्टले खेलापटीसंग भने ।
‘यस कार्यले राष्ट्र र भलिबल संघको बेईजत गरेको देखिन्छ । उसले बाहिर ‘हिरो‘ बन्न, आफ्नो बढुवाका लागि बढाई–चढाई गरेको देखिएको छ ।’ भट्टले भने ।
साग प्रतियोगितामा पुरुष टिम बाहिरिएसंगै लिस्ले महिला टिमसँगै होटेल जोन, कोर्टसम्म आवत जावत गर्ने र कोर्टमा पनि महिला टिमसँग बेच्नमा बस्न खोजेको देखिन्थ्यो ।
उनलाई कयौं पटक रेफ्रीले समेत कोर्टबाट निकालेका थिए । उनी रजत विजेता खेलाडीको पदक वितरण समारोहमा समेत खेलाडी तथा अफिसियलसंग लामबद्ध भएर बसेका थिए । भलिबल संघका पदाधिकारीले उनलाई न त सचेत गराए, न त उनको अस्वभाविक हर्कत रोक्न ध्याननै दिए ।
नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले लिस्लेले एभीसीमा सो कुरा बोल्नु गल्ती भएको र त्यसलाई सुधारका लागि पत्र पठाएको जानकारी गराएको खेलपाटीलाई बताए ।
‘उसले रजत जिताएको बिषयमा एभीसीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उनीहरुले सच्चाएर प्रकाशित गर्छु भनेका छन् ।’ चन्दले भने ।
महासचिव चन्दले लिस्लेलाई महिला टिमको पदक समारोहमा जान दिएर आफुहरुले गल्ती गरेको स्विकार गरेका छन् । चौतर्फी रुपमा आलोचना हुन थालेपछि महासचिव चन्दले नेपाली प्रशिक्षक भट्टलेनै साग खेलमा पदक जिताएको समाचार एभीसीको आधिकारिक वेवमा प्रकाशित गर्न लगाएका छन् ।
पुरुष भलिबल टिमको प्रशिक्षकको रुपमा लिस्ले पहिलो पटक नेपाल आएका थिए । उनकै नेतृत्वमा नेपालको पुरुष टिम एसियन गेम्समा सहभागी समेत बनेको थियो ।
पुरुष टिमबाट खासै सफलता पाउन नसकेका लिस्लेले महिला टिमलाई रजत जिताएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपाली प्रशिक्षकको हुर्मत लिएका छन् ।
भलिबल संघका केही पदाधिकारीले लिस्लेलाई आवश्य भन्दा बढी स्थान दिदा उनले महिला टिमको पदक समारोहमा गएर मेडल लगाएर फोटो मात्र खिचाएनन्, सोही पदक सहितको फोटोलाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा गलत रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
भलिबल प्रशिक्षक कपिल किशोर श्रेष्ठले विदेशी प्रशिक्षकले गरेको गतल हर्कतले नेपाल र नेपाली प्रशिक्षकमाथि अन्याय भएको बताउँछन् ।
‘नेपाली प्रशिक्षकले पदक ल्याउने अनि त्यसको श्रेय विदेशी प्रशिक्षकले लैजान पाउदैन ।’ उनले भने, ‘एभीसीबाट आधिकारिक रुपमा सो बिषयबस्तु आउनु निकै दुखद बिषय हो ।’
घाइते भलिबल खेलाडीलाई समर्थककाे सहयोग
भलिबल संघद्धारा खेलाडीलाई राहत वितरण
भलिबल संघको नयाँ नेतृत्वमा निराेज मास्केको दाबी
संक्रमित खेलाडीमा ४ जना भलिबलका
लक्ष्मी नारायण ट्रस्टद्धारा भलिबल खेलाडीको बिमा